VaGbagbo Votsvaga Rutsigiro Kubva Kuna VaMugabe
Ndira 06, 2011
Vari kushorwa nenyika dzakawanda dzemu Africa nepasi rose kuti vasiye chigaro chemutungamiri weIvory Coast, Va Laurent Gbagbo, vatumira nhumwa yavo kuHarare kuti izoonana nemutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, pamberi pemusangano mukuru weAfrican Union, uyo uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwaNdira mu Blantyre kuMalawi.
VaZoge Abi, avo vanova zvakare mumiriri weIvory Coast mu South Africa, havana kukwanisa kusangana naVaMugabe sezvo mutungamiri wenyika, vari pazororo. Va Abi vazoita musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, uye vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaJohn Nkomo, pamwe nevakafanobata chigaro chegurukota rezvinoitika kunze kwenyika, VaHerbert Murerwa.
Vatori venhau vemapepanhau akazvimirira pamwe nevanoshandira makambani enhau ekunze vari muZimbabwe, varambidzwa kupinda mumusangano uyu. Asi vatori venhau ve ZBC, pamwe neHerald ndivo chete vabvumidzwa.
Vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vanoti VaAbi vari kutsvaga kuti Zimbabwe itsigire VaGbagbo pamusangano we Africam Union uchaitwa kuMalawi uyu. Zvinonzi VaAbi vachatenderera munyika dzakawanda dziri mumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica, kana kuti SADC, vachitsvagira VaGbagbo rutsigiro.
Zvinonzi VaNkomo vavimbisa Va Abi kuti vachazeya nyaya iyi naVaMugabe pavanodzoka kuzororo munguva shoma iri kutevera. Papera musangano uyu, Va Abi vabva vadzokera ku South Africa, uye vanonzi vavimbisa VaNkomo kuti vachasvitsa mhinduro yeZimbabwe kuna VaGbagbo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaTakura Zhangazha, vanoti havaone vatungamiri veZanu PF, avo vanozivikanwa nekubira musarudzo zhinji munyika, vachiramba kutsigira VaGbagbo pamusangano weAfrican Union uyu.
Asi VaZhangazha vati havaone African Union ichitsemuka nepakati panyaya yeIvory Coast sezvo zviri pachena kuti VaGbagbo vakakundwa musarudzo naVa Alassane Quattara.
VaQuattara vanoti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika dzekuIvory Coast, asi VaGbagbo vari kuramba kubva pachigaro vachiti ndivo vakakunda izvo zvakonzera mhirizhonga munyika iyi.
Vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vafa kusvika pari zvino uye zviuru zvizhinji zvinonzi zviri kutsvaga hupoteri munyika dzekunze zvichitevera mhirizhonga iri kuitika mu Ivory Coast.